एप्पल उत्पादनहरूमा यो "i" हो आईफोन समाचार
एप्पल उत्पादनहरूमा "i" भनेको स्टीभ जॉब्सका अनुसार यो हो
के गर्छ "i" त्यो एप्पल केहि उत्पादनहरु को अगाडि राख्छ? यदि म इमान्दार हुनुपर्दछ भने, मैले परिवारको सदस्यसँग गरेको कुराकानीबाट, मलाई थाहा छैन हामी कसरी "म" अभिनवको पक्षमा छौं भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ तर हामी गलत हुन सक्दैनौं। एप्पलले आफ्ना उत्पादनहरूको लागि छनौट गरेका नामहरूको पछाडि कथाहरू यति सरल छैन र त्यो प्रसिद्ध उपसर्गको एक अर्थ हुँदैन, तर धेरै।
पहिलो पटक हामीले प्रख्यात देख्यौं "I" नाम अघि एउटा एप्पल उत्पादन १ 1998 XNUMX in मा थियो, जब स्टीव जॉब्सले पहिलो आईम्याक ल्याएको थियो। पछि, हामीले यसलाई आईपड, आईफोन र आईप्याडमा पनि देख्यौं, साथै कम्पनीका केही कार्यक्रमहरूमा आईमोभी, आईफोटो (बन्द) वा आईडीभीडीमा पनि। उपसर्गको ईन्टरनेटसँग केहि सम्बन्ध छ भन्ने विश्वास पनि व्यापक रूपमा फैलिएको छ, तर हामीले यसको वास्तविक अर्थ पत्ता लगाउन केवल पछि हेर्नु पर्छ।
एप्पलले १ 1998 XNUMX in मा "i" दिएका मतलब
यद्यपि यसको म्याकिन्टसको जस्तै रगत छ, हामी यसलाई एक नम्बरको प्रयोगका लागि केन्द्रित गर्ने छौं कि उपभोक्ताहरूले हामीलाई कम्प्युटर चाहेको कुरा बताउनेछन्, जुन इन्टरनेटमा पहुँच गर्नका लागि - सरल र छिटो। र त्यो यस उत्पादको उद्देश्य हो।
"I" को अर्थ पनि हाम्रोलागि अन्य चीजहरु हुन्। हामी एक व्यक्तिगत कम्प्यूटर कम्पनी हो, र यद्यपि यो उत्पादन वेब को लागी जन्म भएको थियो, यो एक व्यक्तिगत उत्पाद पनि हो। हामी पनि शिक्षण मा ध्यान केन्द्रित गर्न जाँदैछन्। तिनीहरू त्यो किन्न चाहन्छन्। र तिनीहरू प्रायः जसो सिकाउने काममा तिनीहरू उत्कृष्ट छन्।
तपाईले छविमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन अघिल्लो शब्दहरू सँगै आएका थिए, "i" पनि यसको अर्थ हो:
El Apple TV यसले उपसर्गलाई समावेश गर्दैन जुन १ 1998 XNUMX in मा पहिलो आईम्याकको साथ शुरू भएको थियो र भर्खरको उत्पादनहरू जस्तै एप्पल पे, एप्पल वाच वा एप्पल म्युजिकले पनि प्रख्यात "आई" ड्रप देखेको छ। अब प्रश्न छ: के हामी भविष्यमा नयाँ आईप्रोडक्ट देख्छौं?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » एप्पल उत्पादनहरूमा "i" भनेको स्टीभ जॉब्सका अनुसार यो हो
"एप्पलले आफ्ना उत्पादनहरूको लागि छनौट गरेका नामहरूको पछाडि कथाहरू यति सरल छैनन् र त्यो प्रसिद्ध उपसर्गको एक मात्र अर्थ हुँदैन, तर धेरै।" "तर" शब्दमा एकल शब्द हो
Nexus लाई जवाफ दिनुहोस्
LG ले LG G5 लाई एक मॉड्यूलर स्मार्टफोन प्रस्तुत गर्दछ
आईफोन र आईप्याडका लागि उत्तम आरएसएस पाठकहरू